Ajụjụ ọnụ nke Roberto Martínez Guzmán | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Roberto Martínez Guzmán: Onye edemede nke usoro ojii nke Eva Santiago dere.
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere taa na blọọgụ anyị Roberto Martinez Guzman, Orense, 1969, onye edemede nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke Eva Santiago, bụ onye na-ere ahịa akụkọ na-abụghị akụkọ ifo. Akwụkwọ ozi sitere na mmegbu.
«Maka m, onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ na-ahọrọ otu n’ime akwụkwọ m bụ ihe ùgwù, n’ihi na ọ na-arara oge ya ma tụkwasị m obi. Ọ bụ n'aka m ka m chọrọ ikwugharị. Ikwenye ya bu ihe ima aka. "
Akwụkwọ ọgụgụ: Akwụkwọ anọ, ụdị abụọ na ndị na-akwado ya abụọ, otu akụkọ ifo, Eva Santiago, onye uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii, maka usoro ojii gị, na ezigbo ya, Montse, nwere aha ụgha, maka ọrụ izizi gị, akụkọ na-enweghị akụkọ mmekọrịta siri ike, Akwụkwọ ozi sitere na mmegbu. Kedu njikọ dị n'etiti ha abụọ? Olee otú mgbanwe site n'otu onye ọzọ na-eme?
Roberto Martínez Guzman: Enweghị njikọ na, n'ụzọ bụ isi, enweghị usoro a kapịrị ọnụ site n'otu gaa na nke ọzọ. Akwụkwọ ozi si na mmegbu bụ ụgbọ oloko na-agafe otu oge na ndụ. Ihe oru ngo choro otutu onodu nke siri ike ime n'otu oge: akwukwo edere edere na onodu di otua na uche nke onye ozo ka oghaputa, obuna ma oburu na amagh ya. O tinyere ya n’aka m ọ dị m ka m ekwesịghị ịhapụ ya n’ihi na akwụkwọ pụrụ iche ga-efu. Ihe mere na ọ bụ akwụkwọ mbụ m na-ere bụ na rue oge ahụ echeghị m mbipụta ihe ọ bụla m dere, agaghịkwa m eme ya ma ọ bụrụ na Amazon agaghị biri na Spain n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị. M na-ekwu na ọrụ m dị ka onye na-ede akwụkwọ anaghị adabere na akwụkwọ ahụ, kama ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ibipụta onwe ya na nkwa nke iru ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ. M dere tupu m wee na-ede mgbe e mesịrị, nke ahụ bụ naanị paragraf.
AL: Ndị edemede na-agwakọta ma na-echekwa ncheta ha na akụkọ ha nụrụ iji mepụta agwa na ọnọdụ. Oge ndị ọzọ, dịka n'akwụkwọ gị nke mbụ, ha na-enye akụkọ n'eziokwu. Kedu ihe na-akpali Roberto Martínez Guzmán? Kedu ihe ị chọrọ ịmepụta na ndị na - agụ akwụkwọ gị?
RMG: N'akwụkwọ m nke mbụ, enwere m obi ụtọ site n'itinye onye na-agụ ya na akpụkpọ ụkwụ nke nwanyị nke di ya na-emegbu. Aghọtara m na ọrụ m bụ itinye akwụkwọ akụkọ ahụ n'aka onye na-agụ ya dịka m na-ede ya na m ga-eguzo n'akụkụ ya iji gosipụta oghere ndị nwere ike ịhapụ leta ndị na-edebeghị ka ebipụta. Nakwa na ọrụ m abụghị ikpe ihe gosipụtara na ha, kama ọ bụ ilekwasị anya na ịmecha akụkọ ahụ, na-achọ ka onye na-agụ akụkọ ahụ dịrị ndụ na onye mbụ ma, n'ikpeazụ, ọ bụ ya kpere ikpe ndị ahụ.
N'aka nke ọzọ, na akwụkwọ akụkọ m, achọrọ m ka onye na-agụ ya zute ihe odide nke nwere ike ịbụ nke ndụ ha kwa ụbọchị. Echere m na ọ bụ ụzọ akụkọ si eme ka onye na-agụ ya nwee mmasị dị ukwuu na, na aka nke ọzọ, ha nwere ike ịmata ya karịa mfe. Achọghị m mkpụrụ edemede ndị anyị na-agaghị ahụ n ’okporo ụzọ. Ee ee, ama m na m mepụtara ọtụtụ njirimara sitere n’aka onye dị adị.
AL: Akwụkwọ gị kachasị ọhụrụ, Akwụkwọ asaa maka Eva, nke edepụtara na 2016, bụ nke atọ na saga ahụ, mana, n'eziokwu, ọ bụ nke mbụ, ọ bụ ya na-akọ akụkọ banyere onye mbuso agha gị tupu ị kpebie ịbụ onye uwe ojii. Anyị ga-aga n'ihu na-ebi ahụmahụ nke Eva Santiago? Anyị ga-alaghachi ebe ọ kwụsịrị mgbe ọ gachara Kọfị na sịga maka olili ozu? You ga-alaghachi azụ n’akụkọ ifo?
RMG: Nke mbu, ee e, Agaghị m alaghachi na akụkọ na-abụghị akụkọ ifo: ọ bụ ụgbọ oloko akọwapụtara nke mere n'otu oge na ndụ. Anaghị m echere nke ugboro abụọ.
Banyere onye nyocha ahụ Eva Santiago, site na mbido echere m na akwụkwọ akụkọ ahụ niile na-emechi onwe ha, na-enweghị onwe ha na na enwere ike ịgụ ha n'usoro ọ bụla, ka onye na-agụ ya wee ghara iche na ọnyà na saga, yana nke ahụ ha gara n'ihu, ha ga-abụ maka na ọ hụrụ ha n'anya n'ezie. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, enweghị m mmetụta ijikọ ya, ma eleghị anya ọ bụ ya mere na ekpebibeghị m ma ọ bụrụ na a ga-enwekwu nnweta. Kama, ekpebibeghị m mgbe. Na ụkpụrụ, enwere m olileanya ịrara ya akwụkwọ ndị ọzọ, mana amaghị m ma ọ ga-abụ akwụkwọ na-esote ma ọ bụ na afọ ole na ole. Ma ọ bụ ole ga-adị. Ihe m nwere ike ikwu bụ na ha niile ga-abụ ikpe nke Inspektọ Eva Santiago, belụsọ otu, nke ga-abụ akwụkwọ mmechi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na akwụkwọ asaa maka Eva bụ mmalite nke Eva Santiago, ọ ga-ekwe omume na e nwere nnyefe nke bụ njedebe nke Eva Santiago.
AL: Akwụkwọ mbụ na usoro Eva Santiago, Ọnwụ na-enweghị mbilite n’ọnwụ, A sụgharịrị ya na Italiantali na Bekee, ọ bụkwa onye kacha ere ahịa na Mexico, otu n'ime ahịa ndị isi nke ụdị a. Ihe odide mpụ ahụ mere ka Orense rụọ ọrụ n'ahịa mba ọzọ? Galicia ọ na-ere na mpụga oke ala anyị?
RMG: Ọ bụghị na Galicia na-ere, ọ bụ na ọ na-ere ebe ọ bụla edozila ma na-ekwesị ntụkwasị obi na njirimara ya. Nke ahụ doro m anya site na mbido, na ọ bụrụ na achọrọ m onye na-agụ akwụkwọ, onye na-amaghịdị ebe Galicia nọ, nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme ma mata ebe ahụ, ha kwesịrị ntụkwasị obi nke ukwuu maka ọdịdị ala ya, omenaala ya na echiche ndị mmadụ. . Abụ m otu n'ime ndị kwenyere n'okwu ahụ na ọ nweghị ihe ọzọ karịa ụwa karịa ihe na-agbachi agbachi. Ee ee, echere m na mmadụ ole na ole maara Galicia na Mexico mana, n'oge ya ọ bụ onye ndu na nbudata ebook maka ogologo oge.
AL: Otu n'ime akwụkwọ gị, Kọfị na sịga maka olili ozu, nke abụọ na usoro Eva Santiago, ị bipụtara ya na obere obere n'efu, yana Akwụkwọ Serial, dị na blọọgụ gị yana n'elu nyiwe dị iche iche. Ka ị na-ezigara ya, gị na ndị na-agụ akwụkwọ na-emekọrịta ihe, ị gbagburu asọmpi iji maa onye gburu ya bụ. Olee otú ahụmahụ mgbe ahịa ịga nke ọma nke Ọnwụ na mbilite n'ọnwụ? Gịnị si na nnwale ahụ maka Roberto Martínez Guzmán?
RMG: Echetara m na m tụrụ ụjọ nke ukwuu. N'ihi n'eziokwu na enwere ike ịmasị ya obere, mana karịa ihe niile, n'ihi ihe egwu na akwụkwọ mbụ ga-eri nke abụọ. Ọnwụ na-enweghị Mbilite n’Ọnwụ rere nke ọma na ogologo oge, ọ na-emekarị na, n’okwu ndị a, ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ na-aga n’ihu ịmata akwụkwọ akụkọ mbụ. O yiri nzuzu, mana nke ahụ mechara bụrụ ogologo onyinyo nke na-ekpuchi ihe niile ị mechara. N'echiche a, ikekwe eziokwu ahụ bụ na kọfị na sịga maka olili bipụtara na obere na ọnwa ole na ole belata nsogbu a. N'echiche a, asọmpi a na-eche maka onye gburu ọchụ chọkwara ịdọrọ uche nke ndị na-agụ nke mbụ ma lekwasị anya na akụkọ ọhụrụ ahụ, ebe enwere ogbu mmadụ nke a ga-achọpụta.
Akwụkwọ ozi sitere na mmegbu: ezigbo akwụkwọ edere nke nwanyị a na-eti ihe.
AL: Ohi ohi edemede o na-ewute gi? I chere na anyị ga-akwụsị ya otu ụbọchị?
RMG: Mba, ọ naghị ewute m, n'ihi na anaghị m ege ya ntị. Kpọrọ, enwetụbeghị m nnukwu mkpa. Ekwenyesiri m ike na ndị na-ebudata akwụkwọ paireti, n'eziokwu, ọ bụrụ na ha enweghị ike ịme ya, ha agaghị azụta ya n'aka gị. N'aka nke ozo, ekwenyere m na onye ọ bụla na-ebudata akwụkwọ paireti a taa, n'oge na-adịghị anya ike gwụrụ faịlụ ndị gbajiri agbaji, nje virus ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ ma gbanwee na akwụkwọ iwu. N'oge ahụ, ị ​​ga-echeta ndị edemede ị gụrụ hacked na mmasị.
Ekwenyesiri m ike na ya, ma ọ bụ na m chọrọ ịbụ, n'ihi na ọ dị m ka agha furu efu nakwa na ọ na-esiri ya ike ịkwụsị. Ọtụtụ mgbe Latin America bụ mpaghara dị ezigbo enyi, na-enweghị oke ego iji zụta ha (na mba ndị dị ka Venezuela ọ gaghị ekwe omume). Nke ahụ na-emepụta nnukwu ụlọ iji nweta akwụkwọ ntanetị. Ma ọ bụghị naanị ndị ohi, yana nbudata n'efu na iwu. Iji nye gị echiche Kọfị na sịga maka olili ozu na-ebipụta na Storelọ Ahịa Play. Otu izu m were ọnụ ya, dollar, wee kọwaa ihe dị iche na ha, wee ree anọ ma ọ bụ ise. Nnọọ, dị anya site na ọnụ ọgụgụ ya, n'ihi na dị ka nbudata n'efu, n'ime otu izu, ọ na-enwekarị nbudata puku abụọ na puku ise. Nke ahụ bụ ọnọdụ ahụ.
AL: Ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ omume ọ bụla mgbe ị na-ede? You nwere ndị ị na-enye akwụkwọ akụkọ ha tupu ha emezie ihe ikpeazụ ha na aro ha?
RMG: Karịa mania, ọ bụ omume. M na-edekarị na kọmpụta, dezie, bipụta, mezie na mpempe akwụkwọ, gaa na faịlụ kọmputa, mezie ya na ekwentị m, degharịa ya, ọzọkwa, nye ya ngafe na mpempe akwụkwọ. Na usoro ahụ na inwe ike ịmeghachi otu nzọụkwụ. Ndozi niile m chọrọ ruo mgbe m nọdụrụ ala na tebụl, ya na ibé akwụkwọ na-anọdụ n'apata m, ahụghị m ihe ọ bụla m ga-ekwupụta karịa. Nke ahụ bụ omume m, na-agbazi ihe m na-ede na mbara ala, na-enweghị ngwa ngwa, na-ebipụta ederede na akwụkwọ na kọfị n'ihu ya.
Ee ee, n'ezie enwere m ndị ode akwụkwọ na-agụ dị ka ndị na-agụ efu. Ha na mu na ha, site na nkpab friendshipu na nnọnyere.
AL: Anaghị m agwa onye edemede ka ọ họrọ n'etiti akwụkwọ akụkọ ya, kama ka m mara gị dị ka onye na-agụ akwụkwọ. Ọdee ọ bụla masịrị gị, ụdị ị zụrụ naanị ndị e bipụtara?
RMG: Obi na-adị m ụtọ ma m cheta akwụkwọ mbụ m gụrụ ná ndụ m, ọbụna mgbe m bụ nwata: Onye Ọzọ Na-atụgharị Anya, nke Henry James dere. Ọ masịrị m nke ukwuu nke na ọ kpaliri mmasị m ide akụkọ. Daysbọchị ndị a, a na m azụta ihe niile Karin Sla Sla bipụtara.
AL: Kedu oge pụrụ iche nke ọrụ gị dị ka onye edemede? Ndị nke ị ga-agwa ụmụ ụmụ gị.
RMG: Enwere m nwa m nwoke ka ọ ghara inye m ụmụ ụmụ, n'ihi na anaghị m eche echiche nke ọma ka m bụrụ nna nna. Dịkarịa ala maka ugbu a. Ya mere enwere m olile anya na mgbe m chọtara onwe m n'ọnọdụ ahụ, enwere m ọtụtụ oge n'ọdịnihu ịgwa gị. N'ime ndị ahụ rutere ugbu a, enwere m ike ịhapụ abụọ: ụbọchị nke Ọnwụ na-enweghị Mbilite n'Ọnwụ rutere n'ọnọdụ mbụ ịre ahịa na Amazon Spain, na ọzọ nke m na-atụghị anya ya n'ụzọ ọ bụla, mgbe Institute of Knowledge Engineering nke UAM bipụtara ikpeazụ Afọ ihe omumu ya na nsogbu nke Spain nke Day of the Book ma kpebie na akwukwo asaa maka Eva bu akwukwo ojoo nke ndi ogugu kwadoro na Twitter. N'eziokwu, enwere m nnukwu obi ụtọ.
Ọ bụ nke mbụ na ahịa na Amazon, onye edemede doro anya nke akụkọ mmebi iwu, na-etinye aka n'ubu ya na onye kachasị ukwuu, ị họrọla maka mbipụta desktọọpụ, ... , ọbụlagodi na otu onye adịlarị ka Ọ bụ Roberto Martínez Guzmán?
RMG: Ọtụtụ afọ gara aga, echere m na onye mbipụta akwụkwọ agaghị ebipụta onye edemede na-amaghị ama dị ka m, na-enweghị ọnụnọ na mgbasa ozi na onye bi na obere obodo dị ka Ourense. Ọ bụ ya mere na anaghị m atụnyere ibipụta ihe m dere, maka na achọghị m ka ire ahịa m dabere na itinye ndị enyi m aka ka ha gụọ m. Mba, m naghị erere ndị enyi m, ma ọ bụ gwa ha ka ha zụrụ nke ọ bụla n’ime akwụkwọ m. Enwetụbeghị m, achọghịkwa m. Taa, ihe niile agbanweela, akwụkwọ ọgụgụ ahụ agbasawo ebe niile ma onye edemede nwere ike ịnweta ndị na-agụ akwụkwọ, ma ha nwere nkwado nke nnukwu onye mbipụta akwụkwọ, nke nta ma ọ bụ nke onwe. Ọnwụ na-enweghị mbilite n'ọnwụ enyeghị m ya onye ọ bụla, mana ka ọ bara uru na ndepụta ahịa, ọ kpalitere ụfọdụ mmasị n'oge na-adịghị anya. Achọghị m ibipụta ya, n'ihi na n'oge ahụ echere m na ọ gbarala ọkụ. Akwụkwọ asaa maka Eva ga-eso onye nkwusa gaa. N'ezie, mmasị ya ka amụrụ mgbe ọ malitere ide ya, mana n'ikpeazụ anyị erughị nkwekọrịta ma enweghị m nsogbu ibipụta ya n'onwe m. Kama, kọfị na sịga maka olili ozu bịara na Serial Books, n'obi, ụlọ obibi akwụkwọ nke na-amalite amalite nke na-enye m ọrụ masịrị m.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bipụtara onwe gị ma resị ya, ọ bụ ndị mbipụta ahụ na-abịakwute gị ma nye gị mbipụta ha. Ihe ezi uche di na ya, ebe obu na ahia ya bu ire akwukwo. Ma m nwere ike ịnabata ma ọ bụ na m dabere na nkwalite ha na-enye m, n'ihi na maka m, taa, ọ bụ igodo maka ị họrọ maka ha ma ọ bụ maka mbipụta onwe gị. Ọ dị ntakịrị ka mgbe mmadụ na-enweghị onye ọlụlụ, mana ọ dị naanị ya mma. Ọ dịghị ya mkpa inweta ya, ma ọ bụrụ na otu ụbọchị ọ ekweta ime ya, ọ bụ n'ihi na obi siri ya ike na ọ ga-aka mma.
AL: Ihe omuma nke netwọkụ mmekọrịta na -emepụta ụdị edemede abụọ, ndị na-ajụ ha na ndị na-asọpụrụ ha. O yiri ka gị na ha ọ nwere nnukwu mmekọrịta. Ndị na-eso ụzọ 136.000 na Twitter. Kedu ihe ị na-enweta site na mgbasa ozi mmekọrịta? Kedu ihe ha na-eweta dị mma na ndụ gị, na ọrụ gị? Hà karịrị nsogbu ahụ?
RMG: Ndị na-eso ụzọ 136.000 n'ọtụtụ afọ m nọ na Twitter. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ebe ọ bụ na nkwalite niile dabere na m. Have ga-afanyekwa mmekọrịta mmadụ na mmadụ karịa ka ị ga-achọ. Na Twitter bụ otu ụzọ kacha mma. Taa ọ bụ ihe disused. Ihe dị mma gbasara netwọkụ mmekọrịta bụ na ị nwere ike ime ka a mara gị na-enweghị dabere na ndị ọzọ yana yana ị na-akpọtụrụ ndị niile na-agụ akwụkwọ chọrọ ịme ya. Ọ bụ ihe na-enye afọ ojuju, mgbe mmadụ gwara gị na i hiela ụra ọtụtụ awa ma ọ bụ, dịka onye na-agụ ya gwara m otu ụbọchị, na ị mere ka ọ gaa gụọ n'okporo ámá. Ọ bụ n'ezie otu nnukwu afọ ojuju nke ederede na-enye gị na nke na-akwụ ụgwọ maka nsogbu niile, nke dịkwa. Akụkụ ọjọọ nke netwọkụ bụ na ha napụ gị ọtụtụ oge ị ga-ede.
AL: Ọ ga - ekwe omume, n'oge ndị a, iji bie ndụ site na ịde ederede?
RMG: Ee, enwere ndị na-eme ya. Mana n'ezie, ewezuga mmasị ya, ịchọrọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ na-erughị oke, nkwalite e kwenyere na m ga-anwa anwa ikwu na ọ dị mkpa na atụgharịala akwụkwọ gị n'ọtụtụ asụsụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ daberekwa n'ihe onye ọ bụla chọrọ ibi. Enwere ndị na-edozi obere ma ọ dị mfe ịme nfe na enwere ndị ọzọ chọrọ ego karịa ma ọ na-esiri ya ike ịkwụsị ebubo na ụzọ abụọ.
AL: Akwụkwọ dijitalụ ma ọ bụ akwụkwọ?
RMG: Na mpempe akwụkwọ, ọ bụ ezie na njedebe, m na-agwụ mgbe niile ịhọrọ ebook maka mma.
AL: Iji mechie, dị ka mgbe niile, aga m ajụ gị ajụjụ kachasị mkpa ị nwere ike ịjụ onye edemede: Gini mere ị ji ede?
RMG: N'ihi na achọrọ m ịkọ akụkọ. Ekwuru m otu ụbọchị na Twitter na akwụkwọ ọ bụla bụ ọkpụkpọ òkù nye ndị na-agụ akwụkwọ ka ha jee ije n'akụkụ miri emi nke uche anyị; hụ ụzọ anyị si aghọta ndị mmadụ, ihe anyị weere dị ka ihe dị mkpa ma dịkwa mma, ọnọdụ ndị nwere ike ime anyị na ndụ na otu anyị si atụgharị ha. Ọ bụ na onye na-agụ ya na-enye aka ka o jide ya n’aka ibi ndụ ọnọdụ ọ na-echetụbeghị n’echiche. Ọ bụ ya mere, nye m, onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ na-ahọrọ otu n'ime akwụkwọ m bụ ihe ùgwù, n'ihi na ọ na-arara oge ya ma tụkwasị m obi. Ọ bụ n'aka m ka m chọrọ ikwugharị. Ikwenye ya bu nsogbu.
Gracias Roberto Martinez Guzman, na-achọ ka ị nwee ọtụtụ ihe ịga nke ọma, na usoro ahụ anaghị akwụsị, na ị ga-anọgide na-eju anyị anya na akwụkwọ ọhụụ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ nke Roberto Martínez Guzmán, onye edemede nke usoro ojii nke Eva Santiago dere.